कृत्रिम स्वीटनर, प्राकृतिक स्वीटनरहरू र चिनी विकल्प सामान्य रूपमा। के लिने? | बेजिया
पाउ Heidemeyer | | स्वास्थ्य सल्लाहहरू, निर्वाह भत्ता, रोगहरू, पोषण, स्वास्थ्य
प्रायजसो जब हामी स्वस्थ आहारको पथ लिन रोज्छौं हामी चिनीलाई हटाउने र यसलाई मिठाईको साथ बदल्ने पहिलो चीज हो।
अहिले, यदि हामीले लिइरहेका चिनीको मात्रा ठूलो छ र हामी त्यहि मात्रालाई मिठाईहरूको साथ प्रतिस्थापित गर्छौं, हामी आफैंले कुनै पनी पक्षमा गरिरहने छैनौं। हामी हाम्रो इन्सुलिन यति धेरै बढाउन सक्दैनौं, तर हामी के गरिरहेका छौं त्यसले हाम्रो दिमागलाई सोच्दै छ कि हामी अझै चिनी उपभोग गर्दैछौं, जुन मिठोमा यो लतको कारण हो। हाम्रो दिमागले यो धोकेबाजको अन्त्य गरेर अन्त्य गर्दछ र हामी फेरि चिनी लिन थाल्छौं ठूलो वा थोरै हदसम्म। समाधान खपत घटाउने मा निहित छ, चिनीको त्यो लतलाई हटाउनको लागि र यसको लागि हामी आफूलाई मिठाई वा स्वीटनरहरूको साथ मद्दत गर्न सक्छौं।
हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्दछ, हामीले के उत्पादन लिन्छौं, त्यो मिठो स्वादको लत हो। हामीले यो लतलाई रोक्नुपर्दछ र हामी केही स्वस्थ वा सुरक्षित मिठाईहरू पनी फिर्ता जान सक्दछौं जुन उनीहरूले नराम्रोसँग नउठ्ने गरी उत्पन्न गर्दैनन्।
मिठोको खपत कम गर्ने एक फाइदा भनेको त्यो हो हाम्रो स्वाद कलियों धेरै धेरै स्वादहरु लिन हुनेछ (हामीसँग चिनी खाने बानी हुने बित्तिकै धेरै चीजहरूको मीठो स्वाद समावेश छ) र हामी हामी खानाको मजा लिन सक्नेछौं जुन हामीले आफ्नो स्वास्थ्यको हेरचाह गरिरहेका छौं।
1 कृत्रिम स्वीटनर
1.1 Aspartame [E-951]
1.2 Sucralose [E-955]
1.3 एसेल्फल्फे K [E-950]
1.4 धेरै जसो स्वीटनरहरूले आन्द्राको वनस्पतिलाई असर गर्दछन् र हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रो हड्डीहरूको स्वास्थ्यमा ठूलो हदसम्म निर्भर गर्दछ।
2 प्राकृतिक मिठाई
2.1 स्टेभिया [E-960]
2.3 भिक्षु फल
2.4 Xyliton [E-967]
2.5 एरिथ्रिटोल [E-968]
2.6 माल्टिटोल [E-965]
2.7 मन्निटोल [E-421]
2.8 Sorbitol [ई -420]
3 तपाईं आश्चर्यचकित हुन सक्नुहुन्छ: अन्य उत्पादनहरू जस्तै: मह, खैरो चिनी, panela, नरिवल चिनी, फ्रुक्टोज, आदि के बारे ...?
4 त्यसो भए ... चिनी बदल्न उत्तम विकल्प के हो?
प्रश्न प्रायः उठ्दछ कि के सबै मिठाईहरू नराम्रो हुन् वा अरू भन्दा केहि बढी। जे भए पनि, के स्पष्ट छ उनीहरूको वरिपरि ठूलो विवाद हो र तिनीहरूसँग कुनै पौष्टिक मूल्य छैन। अब ... तिनीहरू के हुन्?
S० को दशकमा यसको खोज पछि, यो सबैभन्दा अध्ययन गरिएको स्वीटनरहरू मध्ये एक हो। यद्यपि यसको सेवनले आन्द्रामा रोगहरू निम्त्याउन सक्छ।
यो चिनीबाट प्राप्त गरिएको हो, यो नाराको बखत सायद धेरै नै व्यावसायिकिकरण गरिएको हो कि यसको स्वाद यसकोसँग मिल्दोजुल्दो छ। सत्य यो छ कि यो चिनी भन्दा धेरै मीठा छ।
यो sugar० को दशकमा गल्तीले पत्ता लगाएको थियो जुन चिनीको अंश हो तर कीटनाशकको ​​रूपमा प्रयोग गरिएको थियो, उनले यस उत्पादनको मिठास महसुस गरे।
Lसुक्रलोजले रगतमा चिनी बढाउँदैन, तथापि, सुक्रलोज विरलै मात्र शुद्ध हुन्छ, तर माल्टोड्रेक्स्टिन [E-1400) जस्ता उत्पादनहरूमा मिसिन्छ।। एक उत्पादन जसले सुकरलोजको ग्रेनाई बनावट सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ। माल्टोड्रेक्स्टिनले रगतमा चिनी बढाउछ र धेरै उच्च इन्सुलिन प्रतिक्रिया दिन्छ। त्यसकारण यो मधुमेह रोगीहरूको लागि उत्पादन हुँदैन।
त्यहाँ अध्ययनहरू पनि छन् जुन विषाक्तिको कुरा गर्दछ जुन शरीरको लागि यो गर्न सक्दछ र यसले DNA लाई बिगार्न सक्छ।
यदि तपाईं अझै केहि समय Sucralose उपभोग गर्न चाहानुहुन्छ, यो तरल वा शुद्ध र थोरै मात्रामा हुन दिनुहोस्।
एसेल्फल्फे K [E-950]
सामान्य रूपमा चीचहरू, मिठाईहरू र प्रशोधन गरिएका खाद्य पदार्थहरूको लागि यो एक मिठाई हो। यसको वरपर धेरै विवादहरू हुन्छन् किनकि हामीलाई थाहा छैन कि यसले हाम्रो शरीरलाई कसरी असर गर्छ।
धेरै जसो स्वीटनरहरूले आन्द्राको वनस्पतिलाई असर गर्दछन् र हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रो हड्डीहरूको स्वास्थ्यमा ठूलो हदसम्म निर्भर गर्दछ।
तपाईलाई रुचि हुन सक्छ:
हाम्रो आंतहरु स्वस्थ राख्नु हाम्रो सम्पूर्ण जीवको स्वास्थ्य लाई बचाउनु हो
हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्न डिटोक्सिफाई राख्नुहोस्
प्रतिरोधी स्टार्च यो के हो र यसले के फाइदा गर्दछ?
जब हामी "प्राकृतिक स्वीटनरहरू" को कुरा गर्छौं हाम्रो मतलब उत्पादहरूको विचार हो जुन प्रत्यक्ष प्रयोगशालाको कम्पाउन्डबाट नभई बिरूवाबाट आउँदछ। यो निर्दिष्ट गर्नुपर्दछ, किनभने सबै उत्पादनहरू प्रकृतिबाट आउँदछन् यदि उनीहरूलाई पछि परिमार्जन गरियो भने पनि।
सबैभन्दा प्रसिद्ध प्राकृतिक मिठासहरु मध्ये एक। यो दक्षिण अमेरिका मा एक मूल प्लान्ट बाट आउँछ। स्टीभियाको सबैभन्दा मीठा अंश REB-A कम्पाउन्ड हो, यो हो चिनीको तुलनामा धेरै मीठो, त्यसैले मीठो बनाउनको लागि आवश्यक मात्रा थोरै छ।
स्टेभियाको स्वाद हामी प्रयोग गरिएको मिठास भन्दा फरक छ, र यो परिवर्तन गर्न अझै गाह्रो छ।
स्टेभिया, यसमा एन्टीआक्सीडन्ट गुणहरू छन्।
अहिले, केहि दुर्लभ मामिलाहरूमा यसले हाईपोग्लाइकेमिक समस्या पैदा गर्न सक्छ, जस्तै छिटो मुटुको धड्कन वा चक्कर।
Stevia खपत गर्दा, तपाईंले ध्यान दिनु पर्छ त्यो अन्य कम्पोनेन्टहरूसँग मिसिएको छैन जस्तै माल्टोडेक्सट्रिन (जसको बारेमा हामीले माथि कुरा गर्यौं) वा डेक्सट्रोजको साथ (जुन चिनीबाहेक केहि होइन)।
यदि यो एरिथ्रिटोलसँग मिसाइएको छ भने यो समस्या होईन।
यो एक छ केहि तरकारीहरु को घटक जस्तै प्याज वा chicory। त्यहाँ अध्ययनहरू छन् जुन यसले हाम्रो आन्द्रा वनस्पतिका लागि लाभदायक छ भनेर देखाउँदछ किनकि यसले हाम्रो आंत्रमा किण्वित गर्दछ र त्यसैले यो प्रिबायोटिक हो।
यसलाई उपभोग गर्न सधैं मध्यम मात्रामा अधिक खपतको साथ ग्यास वा पखाला हुनबाट बचाउनको लागि।
यो सायद कम ज्ञात छ। यो मिठाई यो शुद्ध भेट्टाउन गाह्रो छ त्यसैले यसबाट बच्न राम्रो हुन्छ। वर्तमानमा यो यसको नवीनताका कारण एकदम महँगो उत्पादन हो। उसको स्वाद चिनीसँग मिल्दोजुल्दो छ र ईन्सुलिन प्रतिरोधको साथ समस्या उत्पन्न गर्दैन यदि यो शुद्ध छ भने।
यी मिठाई हुन् जुन चिनीबाट आउँदछ, तिनीहरू नामको बावजुद अल्कोहलहरू हुँदैनन्। निश्चित रूपमा तपाईंले तिनीहरूलाई चिनी-मुक्त गम जस्ता उत्पादनमा देख्नु भएको छ।
यो चिनी गममा एकदमै अवयव हो, यो हो हाम्रो मुख को लागी स्वस्थ उत्पादन को लागी लाभदायक ब्याक्टेरियाहरु लाई खुवाएर जुन हामीमा छ र खराब ब्याक्टेरियाबाट बचाउँछ
हो चिनीलाई अवशोषित गर्ने सम्बन्धमा यसले हाम्रो शरीरमा सानो प्रभाव पार्दछ। यद्यपि यो आफैलाई चिनीसँग तुलना गर्न सकिदैन, यो प्रभाव नोट गर्नु महत्त्वपूर्ण छ किनकि यो निश्चित व्यक्तिहरूको लागि समस्या हुन सक्छ।
यो पदार्थ यो कुकुर र अन्य घरपालुवा जनावरहरूलाई धेरै विषाक्त छ, त्यसैले सावधान हुनुहोस् कि तिनीहरूले केहि गम वा उत्पादन लिन सक्छन् जुन यो समावेश गर्दछ।
यो बिभिन्न फलबाट आउँदछ र मिठो मिसाईसँग चिनीको तुलनामा तुलनात्मक हुन्छ।
यस उत्पादनको फाइदा भनेको त्यो हो यो सानो आन्द्रामा समाहित हुन्छ र पेशाबमा उत्सर्जित हुन्छ, यसले इन्सुलिन वा ग्लुकोजलाई असर गर्नबाट जोगिन मद्दत गर्दछ। यो ठूलो आन्द्रामा नपुगेको कारण यो मलको समस्या नभए पनि यसको कारण छ।
यो यस्तो उत्पादन हो जुन तातोमा स्थिर छ, त्यसैले यसलाई भान्छामा समस्या बिना नै प्रयोग गर्न सकिन्छ।
हुन सक्छ धेरै आन्द्रा समस्या आन्द्रामा समाहित हुन्छन् र ग्लुकोज र इन्सुलिन प्रतिरोधमा प्रभाव पार्दछन्। तसर्थ, तिनीहरूलाई बेवास्ता गर्न उत्तम हो।
यसले ठूलो समस्या प्रतिनिधित्व गर्दैन किनकि यसले चिनी वा इन्सुलिन प्रतिरोध बढाउँदैन। यसले हाम्रो आंतहरूलाई नकरात्मक रूपमा प्रभाव पार्दैन।
Sorbitol [ई -420]
माल्टिटोल जस्तै, यसले धेरैलाई निम्त्याउन सक्छ आन्द्रा समस्या, आन्द्रामा समाहित हुन्छन् र ग्लुकोज र इन्सुलिन प्रतिरोधमा प्रभाव पार्दछ। तसर्थ, तिनीहरूलाई बेवास्ता गर्न उत्तम हो।
तपाईं आश्चर्यचकित हुन सक्नुहुन्छ: अन्य उत्पादनहरू जस्तै: मह, खैरो चिनी, panela, नरिवल चिनी, फ्रुक्टोज, आदि के बारे ...?
यी सबै उत्पादनहरूले चिनीको रूपमा हाम्रो शरीरमा काम गर्दछ, त्यसैले यदि हामी चिनीलाई हटाउन चाहन्छौं, तिनीहरू एक विकल्प हुँदैनन्। यद्यपि यी सबै विकल्पहरूमा त्यहाँ केहि हुन्छन् जुन पोषणको लागि मह अझ बढी कुरा गर्ने योगदान पुर्‍याउँछ। अवश्य पनि, एक कच्चा र वास्तविक मह।
त्यसो भए ... चिनी बदल्न उत्तम विकल्प के हो?
हामीले सम्पूर्ण लेखमा हेरेका सबै पदार्थहरू मध्ये, ती ती हुन् जुन हाम्रो शरीरको लागि राम्रो देखाइएको छ र दिन प्रति दिनको आवश्यकताका लागि अधिक बहुमुखी छन् स्टेभिया र एरिथ्रिटोल।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » स्वास्थ्य » निर्वाह भत्ता » कृत्रिम स्वीटनर, प्राकृतिक स्वीटनरहरू र चिनी विकल्प सामान्य रूपमा। के लिने?
गर्मी देखिन्छ: सेतो सेतोमा सेता